Xildhibaan Cosoble “Waxaa jira Heshiisyo Wasaaradda A. Dibadda soo gashay oo aan la horkeenin Baarlamaanka” – Banaadir weyne
Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha dibadda ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali ayaa sheegay inay jiraan Heshiisyo ay Wasaaradda arrimaha dibadda soo gashay oo aan la horkeenin Baarlamaanka.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble ayaa sheegay in Guddiga Arrimaja dibadda uu warqad u diray Wasaaradda, kana codsaday in heshiisyadaas la horkeeno Baarlamaanka.
“Waxaa jira Heshiisyo fara badan iyo Ham maamuus ay soo gashay Wasaaradda arrimaha dibadda oo aan weli la horkeenin Baarlamaanka, illaa hada Wasaaradda codsi ayaa u dirnay, waxba noogama soo jawaabin”ayuu yiri Xildhibaan Cosoble.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inuu jiray heshiis ay wada galeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga, oo Baarlamaanka dalka Turkiga uu ansixiyay, balse illaa iyo hada aanu Heshiiskaas la horkeenin Baarlamaanka Soomaaliya,
“Waxaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ka codsaneynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ay u horkeento Baarlamaanka heshiisyada u baahan in Baarlamaanka la socdo”ayuu mar kale yiri.
Labadii sano ee u dambeeyay ayaa dowladda Madaxweyne Farmaajo heshiisyo kala duwan la soo gashay dalalka deriska iyo kuwa Caalamka, mana jirto heshiisyadaas oo shacabka lala wadaagay ama loo soo gudbiyay, waxaana heshiisyada dad badan tuhunka ka qabaan ka mid ah heshiiska saddex geesoodka ee Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya oo aan Baarlamaanka loo soo gudbin. – Jowhar News